ပင်ကောင်းသောနှင့်တည်ငြိမ်ဆက်ဆံရေးဟာငြီးငွေ့စရာနှင့်စိတ်မဝင်စားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်ရုံခဏလာနဲ့ကျွန်မအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းလိုပါကသင်သည်သူတို့၏ကိုယ်လက်အတွက်ပဏာမခြေလှမ်းကို ယူ. အိပ်ရာအတွက်သူမ၏ချစ်သူကိုသမားရိုးကျမဟုတ်သောလုပ်ရပ်များအံ့သြဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆသင့်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်မီးပွနျလညျရှငျကိုကူညီ မေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏ သစ်တစ်ခုအဆင့်အထိဆက်ဆံရေးဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဤမေးခွန်းကိုတစ်ဦးနှင့်အဖြေကိုပေးစေခြင်းငှါမဖြစ်နိုင်ပေ။ ဆူဖြိုးမိန်းကလေးတွေနဲ့တူလူပျိုလူတို့သညျ, အခြားသူများဂျပိန်အမျိုးသမီးတွေပိုနှစ်သက်နေစဉ်။ ဤတွင်အရသာတဲ့ကိစ္စ။ ယောက်ျား၏ကိုယ်စားလှယ်သင်နှင့်အတူအိပ်သွားလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကသူထူးခြားသငျသညျ likes ဆိုလိုသည်။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှကိစ္စမဖက်ခဲ့ပုံကိုတော်တော်အဘယ်သူမျှမနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခြင်းနှင့်အိပ်ရာမိန်းမပျိုကျကျင်းပကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်။ အိပ်ရာများတွင်တစ်ဦးသည်လူကိုအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုနားလည်ရန်ကြောင့်, သငျသညျယုံကြည်မှုနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, sexologists စာရင်းဇယားအရသိရသည်ယောက်ျား၏ 80%, တစ်ဦးသူနာပြုများ၏ပုံရိပ်ကို၌သူ၏ Darling ကြည့်ဖို့တစ်ကျောင်းသူလေးသို့မဟုတ်တစ်ရဲအရာရှိလို။ တောင်းဆို ဒါကလိင်ဆိုင်ကိုသွားနှင့်သင့်ချစ်သူကိုအထင်ကြီးခွင့်မတ်မတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးကိုချစ်ကြောင်းလူသိများသည်။ အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုထူးဆန်းအိပ်ရာအသစ်အတွေ့အကြုံများရှာနေမခံခဲ့ရ, အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဤယောက်ျားကိုအဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်လိုအပ်ပါကကြောင်းကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအားထုတ်မှုများအတွက်, သူသည်ကိုယ်ပီတိဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်။
သငျသညျအိပ်ရာအတွက်သူမ၏ချစ်သူကိုအံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေ, သင်တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စကိုချဉ်းကပ်ဖို့လိုတယ်။ မည်သည့်စမ်းသပ်မှုပြင်ဆင်နေခြင်းမပြုမီ, ကသေချာဖက်သည့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအောင်လိုအပ် စိတ်ဓါတ်များ , ကတန်ဖိုးထားပါတယ်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပျ၏ 12 နာရီအကြာတွင်နေအိမ်ပင်ပန်းလာလျှင်ဥပမာ, အဲဒါကို playfully ကို set up, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲဝမျးသာအရသာညစာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတနှင့်အိပ်ပျော်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမရှိပါလျှင်မူကား, ကအံ့အားသင့်စရာအချို့မျိုးပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်ပင်လိုအပ်ပေသည်။
ဥပမာ, ဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိ, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာလေထုဖြစ်စေလျက်, အချို့အရသာဟင်းလျာများချက်ပြုတ်။ ကြင်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့် sexy အတွင်းခံမမေ့မလြော့ပါ။ အဲဒီအစားစံနိဒါနျး၏, သင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာ petting ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအိပ်ခန်းထဲမှာသာမန်အားဖြင့်အရပ်ဌာနကိုယူလျှင်, သင်၏အစိတျအပိုငျးအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောပဏာမခြေလှမ်းကလူကိုခစျြလိမျ့မညျ။
ခင်ပွန်း porn ကိုချောင်းမြောင်း
နှစ်ပေါင်း 30 အကြာတွင်မိန်းမတို့အဘို့ contraceptives
Gel ချောဆီကို - ကဘာလဲ?
ထိပ်တန်း 10 အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်
တစ်ဦး perfectionist ၏မရဏာ: ဤလောက၏သဟဇာတနှောင့်အယှက်ပေးသော 31 ဓာတ်ပုံများ,
မင်းသမီး Emma Watson ဟာသူမ၏ရည်းစားဝီလျံနိုက်ကနေခွဲထွက်လိုက်ပါတယ်
Cystitis - ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကုထုံး
ဟယ်လိုများအတွက် sexy ဝတ်စုံ
ခလုတ်နဲ့အတူစကတ် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်စတိုင်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
မွေးကင်းစအတွက် rickets ၏ကုသမှု
ဂျေဆန် Momoa နဲ့ Lisa Bonet
Multivarka ကိတ်မုန့် - ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်
အမြန် cookies တွေကို
ဟောလိဝုဒ်အတွက်အကြီးစားတိုက်ပွဲများရိုက်ကူးရေးရာသီ 8 "Thrones ၏ဂိမ်း" ၏အသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသည်
Fingerless လက်အိတ် - တစ်ဦးစတိုင်လေးကိုဖန်တီးရန်, ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုအဘယျအဖြစ်ပျက်?